Dombo Kukwidza Machine Vagadziri & Vatengesi - China Stone Kukwidza Machine Factory
yeChinese Dombo Machina
Dombo rekucheka Matombo
Dombo Kukwidza Machine
Dombo Kuisa Muchina
Imwe Dombo Muchina
Otomatiki Kukwiza Machine yeGranite
Muchina uyu neepasirose yepamberi nhanho yegranite ibwe kukuya uye kupukuta michina, JOBORN aive neR & D nekuigadzira pahwaro hwezvakanakira zvigadzirwa zvakafanana kumba nekune dzimwe nyika. Iyo indasitiri dhizaini yemuchina kutungamira iyo indasitiri maitiro, Kukuya uye kupukuta ef ...
Otomatiki makorari muchina weMarble
Muchina uyu neyakaganhurirwa yepasirese padombo rekugaya uye kupukuta michina, JOBORN aive neR & D nekuigadzira pahwaro hwezvakanakira zvigadzirwa zvakafanana kumba nekune dzimwe nyika. Iyo indasitiri dhizaini yemuchina kutungamira iyo indasitiri maitiro, Kukuya uye kupora kugona ...
Otomatiki Litchi-Surface Kugadzira Machine
Muchina uyu neepasirese epamberi mwero wedombo litchi-pamusoro yekugedza michina, JOBORN aive neR & D uye achiigadzira pahwaro hwezvakanakira zvigadzirwa zvakafanana kumba nekune dzimwe nyika. Iyo indasitiri dhizaini yemuchina kutungamira iyo indasitiri maitiro, Kukanda kushanda uye kukuya ...
Manual Makorari Machine
Muchina uyu unoshandisa yakakomberedza ikholamu seyayo gwara rekutsvedza pamusoro pekudzikamisa otomatiki kumusoro uye pasi. Muchina uyu unoshanda kukuya nendege nekukorobha kwemasabs ane ukobvu hwakasiyana siyana, mabwe ematombo, uye dombo rakagadzirwa. Iyo inoshanda inogona kusarudzwa yekukuya mhizha camber mukati ...
Stone Edge vachikuya Machine
The vachikuya vhiri muchina uyu adopts mvura vachikuya dhisiki uye iri vakapakata hozhwa bhakoro vadyi. Zvinoenderana nehukuru hwakasiyana uye ukobvu hwebwe, kurudyi-kona yepasi pamucheto wematombo akasiyana-siyana anogona kuve pasi. Iyo yakasimbiswa yakatwasuka inopenya, iyo kurudyi-kona yepasi kumucheto ini ...
Nyanzvi yehunyanzvi mainjiniya yakatsaurirwa kukutungamira
Zvinoenderana nezvamunoda chaiko, sarudzai anonzwisisika dhizaini nekuronga maitiro
Fujian Joborn Machinery Co, Ltd.
Hailian Pioneer Park, Guta reShuitou, Guta reNan'an, Dunhu reFujian